Waxaa xusid mudan in Leedahay shidin la taabto ama inaan la siin?
> Resource > Talooyin > Waxyaabaha aad ogaanaysid Waa saabsan shidin taabashada
2011 waa sanad u ah Amazon ee goobada eReader. Bishii September, Amazon soo bandhigay saddex shiddaa, ee jiilka afaraad ee shidin, huriyaan dab iyo shidin taabto. Aad dareentay wax, sax? Haa. Amazon jirsado si ay u horumariyaan shiddaa cusub screen taabto. Just dayacaad huriyaan dab halkan, oo maamusha nidaamka 2.3 hawlgalka Android. Ha ka hadalno shidin taabto, shidin e-iyo khad bandhigay taabashada ah, eReader ugu fiican ee suuqa.
Shidin taabashada ku qalabeysan yahay bandhigay E-khad 6-inch ah. Dadka Cunid akhriska, E-khad waa doorasho wanaagsan, waayo, waa ay awoodaan in ay ilaaliyaan indhaha akhristayaasha iyo horumarinta waayo aragnimada akhriska. Reading soo bandhigay E-khad waa ka badan ama ka yar sida la waraaqa ama hardcover akhriska. Ayaa soo bandhigay 6-inch uu yar yahay iyo Nuur-miisaamaa, taasoo u fududaynaysa in ay ku dhawaad ​​qaado. Oo waxaa gaar ahaan wanaagsan in la akhriyo eBooks, sida TXT ama qaab EPUB eBooks ku yaal. Si kastaba ha ahaatee, marka aad gaadho in ay files Rafaa, PDF eBooks, waa in yar oo ah isku xirka. Marka shidin taabashada toos ah habaysaa PDF oo ku haboon shaashadda, font wuxuu noqonayaa yar. Marka aad Mozilla in PDF shaashadda taabashada, bogga ah PDF oo aan si buuxda u soo bandhigay. Waa in aad dib u soo rogto inay akhriyaan files PDF ah. Haddii ay sidaa tahay, waxaad u baahan tahay in ay isticmaalaan Wondershare PDF Converter si loogu badalo PDF in lagu shidi saaxiibtinimo qaab u ku shidin akhriska.
Touchscreen ayaa kala xiriiri shidin ka teebabka shidin. Screen waa yara badan ee model afaraad ee jiilka. Waxa ay u muuqataa Boggagaan badhamada jeestay la bedelay daaha. In kastoo ay tani tahay markii ugu horeysay ee Amazon soo saaray xiriiri-screen e-Reader, laakiin Amazon adag runtii ka shaqeeyey hagaajinta saamaynta khaanada on keyboard ee dalwaddii. Shidin hadda la xidhiidho waa ugu caansan screen E-khad xiriiri e-Reader.
Sida shiddaa kale, shidin xiriiri aad u saamaxaaya in ay helaan kumanaan buugaag, joornaalada, wargeysyada, buugaag ku Amazon dukaanka online. Waxaad awoodi karto eBooks on e-akhriyaha sidii waxa aad sameyn la shiddaa kale. Hadda xiriiri shidin la Wi-Fi waa $ 99, kaliya la mid ah sida dabka. Haddii aad u baahan tahay version 3G ah, waa $ 50 oo dheeraad ah lagu dari.
All oo dhan, shidin taabto waa miisaanka, is e-Reader qiimo ah la awoodi karo iyadoo screen ah taabashada e-khad. Marka huriyaan dab ku guuldareysto in ay muujiyaan sida e-Reader, shidin taabto uun ka daganayd warkiisii ​​sida ugu fiican e-Reader abid.